Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.3.3 ataon'ny mpiara-to-patanty
Handinika-to-patanty misokatra antso izay manampy patanty mpanadina mahita mialoha zavakanto; dia mampiseho fa misokatra antso azo ampiasaina bebe kokoa noho ny faminaniana ny olana.
Patanty mpanadina manana asa mafy. Izy ireo mandray terse, lawyerly famaritana ny famoronana vaovao, ka dia tsy maintsy manapa-kevitra raha toa ka voalaza famoronana dia "tantara noforonina." Izany hoe, ny mpandinika dia tsy maintsy manapa-kevitra raha toa ka misy "mialoha zavakanto" -a voalaza teo aloha dika ity namorona-izay hanome ny natolotra patanty tsy manan-kery. Mba hahatakarana ny fomba ity dingana ity miasa, dia aoka ny mandinika ny patanty mpandinika atao hoe Albert, ho fanomezam-boninahitra an'i Albert Einstein, izay nahazo ny fanombohana ao amin'ny Soisa patanty Office. Albert afaka mandray ny fampiharana toy ny US patanty 20070118658 fitoriana ny Hewlett Packard ho "User-selectable fitantanana fanairana endrika", ary voalaza ao Beti-be ny boky Noveck Wiki Governemanta (2009) . Ity ny voalohany milaza amin'ny fangatahana:
"Ny rafitra solosaina, izay ahitana: a processeur; fototra fahan'ny / output rafitra (Bios) anisan'izany ny lojika toromarika izay, rehefa novonoina ho faty noho ny processeur, ampiendrehina ny processeur to: hanombohana fahefana amin'ny tena fitsapana (POST) fanodinana ao amin'ny fototra fahan'ny / output rafitra ny computing fitaovana; amin'ny iray na mihoatra ny fitantanana mailo format amin'ny mpampiasa interface tsara; mandray ny fantina famantarana avy amin'ny mpampiasa interface tsara famantarana iray amin'ireo fitantanana fanairana format aseho ao amin'ny mpampiasa interface tsara; ary ampiendrehina ny fitaovana ampiarahana ny computing rafitra fitantanana ny fantatra fanairana endrika. "
Tokony Albert loka 20 taona ampihimamba zo izany patanty na efa nisy mialoha nisy zavakanto? Ny tsatòka maro patanty fanapahan-kevitra dia avo, nefa indrisy, Albert dia tsy maintsy manao fanapahan-kevitra izany raha tsy be dia be ny fanazavana mba mila. Noho ny goavana backlog ny Patents, Albert dia miasa eo ambany fanerena mafy ny fotoana, ary tsy maintsy manao ny fanapahan-kevitra mifototra amin'ny 20 ora fotsiny ny asa. Koa, noho ny ilaina ny hitandrina ny volavolan-famoronana miafina, Albert dia tsy mahazo maka hevitra amin'ny manam-pahaizana any ivelany (Noveck 2006) .
Izany toe-javatra mpampianatra lalàna namely Beti Noveck ho tapaka tanteraka. Tamin'ny Jolay 2005, aingam-panahy amin'ny ampahany amin'ny Wikipedia, dia namorona bilaogy mitondra ny lohateny hoe "ataon'ny mpiara-to-patanty: A Tsotra Tolo-dalàna" izay niantso ny misokatra ataon'ny mpiara-famerenana ny rafitra ho an'ny Patents. Taorian'ny fiaraha-miasa amin'ny Etazonia sy ny famantarana patanty Birao sy nitarika orinasa teknolojia toy ny IBM, ataon'ny mpiara-to-patanty dia natomboka tamin'ny Jona ny 2007. A efa ho 200 taona-birao-panjakana sy ny mpahay lalàna maromaro toa toy ny toa tsy toerana mba hitady zava-baovao , fa ny ataon'ny mpiara-to-patanty manao ny asa ny mahay mampifandanja tsara tarehy ny olona rehetra liana.
Sary 5.9: mandinika-to-patanty workflow. Source: Bestor and Hamp (2010) .
Toy izao ny fomba fiasan'izy (Sary 5.9). Rehefa manaiky ny mpamoron-javatra mba hanana ny fampiharana mandeha amin'ny alalan'ny fiaraha-monina Review (bebe kokoa mikasika ny antony mahatonga azy manao izany indray mipi-maso), ny fangatahana dia namoaka ny tranonkala. Manaraka, ny fangatahana dia resahina amin'ny vondrom-piarahamonina mpanome hevitra (indray, mihoatra ny antony mba handray anjara amin'ny indray mipi-maso) sy ny ohatra azo atao mialoha zavakanto dia hita, annotated, ka nampakatra ny vohikala. Ity dingana ity ny fifanakalozan-kevitra, fikarohana, sy ny fanatsofohanao sary mitohy, mandra, amin'ny farany, ny fiaraha-monina ny mpanome hevitra vato mba mifidy ny ambony 10 sekely ahiahiana mialoha ianao izay avy eo nalefa tany amin'ny patanty mpandinika ny famerenana. Ny fanamarinana avy eo mitarika azy mpandinika ny fikarohana sy miaraka amin'ny fahan'ny amin'ny ataon'ny mpiara-to-patanty mahatonga ny fitsarana.
Niverina indray ny US patanty 20070118658 ho "User-selectable fitantanana fanairana endrika." Patanty io dia nampakatra ny peertopatent.org tamin'ny Jona 2007 izay dia namaky ny Steve Pearson, nisy rindrambaiko ambony injeniera for IBM. I Pearson tsara amin'ity faritra ity ny fikarohana sy nampahafantatra ny tapa-mialoha zavakanto: ny boky avy any Intel mitondra ny lohateny hoe "Active fitantanana Teknolojia: Quick Reference Guide" izay nivoaka roa taona talohan'izay. Efa voaomana hiady miaraka ity lahatsoratra ity, ary koa ny hafa mialoha ny zavakanto sy ny fifanakalozan-kevitra avy amin'ny ataon'ny mpiara-to-patanty fiaraha-monina, ny patanty mpandinika nanomboka lalina famerenana ny raharaha, ary farany nandroaka ny patanty fampiharana, amin'ny ampahany noho ny Intel boky fampianarana izay nisy toerana ny Pearson (Noveck 2009) . Ary tamin'ny 66 tranga izay efa vita ataon'ny mpiara-to-patanty, efa ho 30% dia nolaviny voalohany indrindra mialoha mifototra amin'ny zavakanto hita amin'ny alalan'ny ataon'ny mpiara-to-patanty (Bestor and Hamp 2010) .
Inona no mahatonga ny famolavolana ny ataon'ny mpiara-to-patanty kanto indrindra no lalana fa mahazo ny olona maro mifanipaka tombontsoa rehetra miara-dihy. Tsain no mandrisika ny handray anjara amin'ny famerenana ity patanty misokatra satria ny patanty biraon'ny nandinika ny ataon'ny mpiara-to-patanty fampiharana haingana kokoa noho ny Patents mandalo ny nentim-paharazana, miafina famerenana dingana. Mpanome hevitra no mandrisika handray anjara mba hisorohana ny fanomezana ny "tratran'ny mpanara Patents," ary maro toa mahita ny dingana mahafinaritra. Farany, ny patanty birao sy ny patanty mpanadina no mandrisika mba handray anjara satria ho afaka ihany ny vokatra tsara kokoa. Izany hoe, raha ny fiaraha-monina famerenana dingana mahita 10 ratsy tapa-mialoha ianao, ity asa ity dia azo tsinontsinona ny patanty mpandinika. Amin'ny teny hafa, ataon'ny mpiara-to-patanty sy ny patanty mpandinika fiaraha-miasa dia tokony ho toy ny tsara na tsara kokoa noho ny patanty mpandinika miasa any mitokantokana. Noho izany, dia tsy misokatra foana antso hisolo manam-pahaizana; indraindray izy ireo manampy ny manam-pahaizana hanao ny asany tsara kokoa.
Na dia ataon'ny mpiara-to-patanty dia toa hafa noho ny Netflix loka sy Foldit, dia manana rafitra mitovy amin'izany vahaolana dia mora kokoa ny hijery noho ny hiteraka. Raha vao misy olona mahatonga ny boky "Active fitantanana Teknolojia: Quick Reference Guide" dia somary mora-ho patanty mpandinika amin'ny kely indrindra-mba hanamarinana fa tahirin-kevitra ity dia mialoha ny zavakanto. Na izany aza, nahita fa ny boky no tena sarotra. Ataon'ny mpiara-to-patanty koa fa misokatra antso tetikasa dia azo atao na dia ny asa izay tsy mazava ho azy fa tompon'andraikitra manoloana quantification.